Borgo Cerreto-Ilizwe lakho libaleka kufutshane neAscoli
Ikhaya leholide yonke sinombuki zindwendwe onguIngrid
Indawo efanelekileyo yeholide yakho yokuphumla eMarche, eli khaya libuyiselwe kakuhle linedama lokuqubha likwilali encinci nje i-12km ukusuka kwiindawo ezidumileyo zehlabathi kunye ne-piazza ye-Ascoli Piceno kunye nemizuzu engama-40 yokuqhuba ukusuka eSan Benedetto del Tronto, indawo yokuphumla elunxwemeni. idolophu. Chitha iholide yakho undwendwela iindawo zembali zale ndawo, uphumla ngaselwandle, ukukhwela intaba/ukuhamba ngebhayisekile kwiindlela zeeNtaba zeSibillini, okanye ukuzulazula echibini kwaye wonwabele imbonakalo yasemaphandleni.
Umnyango wendlu uvula kwiholo unika ukufikelela kumagumbi kunye nokuvula ikhitshi kunye negumbi lokuhlala.
Kukho amagumbi amabini okulala: igumbi lokulala eliphambili (ibhedi elingana nokumkanikazi) kunye negumbi lokulala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Igumbi lokuhlala linesofa yokutsala elala abantu ababini.
Igumbi lokuhlambela linekhabhathi yokuhlamba kunye nefestile egcwalisa igumbi ngokukhanya.
I-Apartment: Iholo, igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokulala elikhulu, igumbi lokulala elineebhedi ezi-2, igumbi lokuhlambela.
Isixhobo: indawo yokungena ezimeleyo
Iinkonzo (zongezelelekileyo) : Umabonakude, i-oven yombane, i-oven microwave, idishwasher, umatshini wokuhlamba, i-wifi.
Wamkelekile e-Borgo Cerreto-iNdawo yokuya eMarche
Indawo efanelekileyo yeholide yakho yokuphumla
Kutshanje i-restaured, i-Borgo Cerreto (imvelaphi yayo isusela kwinkulungwane ye-13) yiperile efihlwe kwiinduli zengingqi yaseMarche. Kwiikhilomitha ezili-12 kuphela ukusuka e-Ascoli Piceno kunye nemizuzu engama-40 ukusuka eSan Benedetto del Tronto, indawo eyaziwayo yolwandle elunxwemeni lolwandle i-Adriatic, ibekwe kwimida yePaki yeSizwe yeeNtaba zeSibylline. Ukusuka kwi-470 mtr a.s.l. Umphakamo unika umbono omangalisayo we-360 ° phezu kwendawo yonke esembindini we-Appennine ridge kunye njengemvelaphi yencopho yeGran Sasso.
Ilungele usapho olufuna ukuba neholide enoxolo nethuba lokutyelela iindawo zobugcisa, iilali zamandulo, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, okanye ukukhwela amahashe.
Le ndlu iquka iGadi entle yaseWest, iholo enkulu (isitebele esidala esinendawo yokutyela) enekhitshi lokonwabisa nokutya ngaphandle. Indawo yokuqubha ifumaneka kwiGadi yaseMpuma ene-pergola kunye nebala lokudlala labantwana. kwiimitha ezili-100 kuphela ukusuka kwindlu kwaye iphantsi kokusetyenziswa okwabelwanayo nabanini.
IRoma ikumgama oziikhilomitha ezili-180 kuphela uqhuba ngeSalaria; ummandla we-Umbria unikeza ithuba lokutyelela i-antique Nursia (Norcia) i-50 km kude kunye ne-ski resort e-Forca Canapine kwiNtaba yeVettore kunye ne-Piana di Castelluccio di Norcia yi-40 km kude kwiindlela ezigangathiweyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ingrid
Abanini bahlala phezulu kwaye baya kukuvuyela ukukunceda ngalo naluphi na ulwazi onokulufuna.